Ukugoqwa Kwesaladi Le-Avocado Ranch - Ungadliwa
ungawosa kanjani amazambane abomvu wengane
iresiphi yamapentshisi usebenzisa amapentshisi afriziwe
uyipheka kanjani inyama yenyama yengulube esitofini
I-tomato sauce ifana ne-pasta sauce
Ukugoqwa Kwesaladi Le-Avocado Ranch
Lesi saladi esilula se-Avocado Ranch Chicken silayishwe ukunambitheka (futhi akuqukethe imayonnaise) yohlobo olukhanyayo olumnandi lwesaladi ejwayelekile yenkukhu. Kubhangqwe nemifino yethu emisha esiyithandayo futhi kugoqwe ngesinkwa esisicaba seFlatout ngesidlo sasemini esiphansi esizogcina isisu sakho sijabule usuku lonke! Siyabonga kubangani bethu eFlatout ngokubambisana nathi nokuxhasa lokhu okuthunyelwe!
Into eyodwa engihlala ngigxila kuyo ngemuva kweholide (ngemuva kwakho konke ukuzitika engikwenzayo) ukuqinisekisa ukuthi ngifaka ukukhetha okusha, amaprotheni anciphile kanye nososo onempilo kanye nokugqoka ekudleni kwami. Ungangizwa kabi, nakanjani ngisazitika njalo, kepha ngithola ukuthi yisikhathi engizama ukulinganisela ngaso.
Ngenkathi ngizama ukuba nesiqalo esihle esisha, ngiyathanda nokuqhubeka ngidla izintandokazi zami ngakho-ke ngithanda ukubabeka kahle. Into eyodwa engithanda ukuyidla isidlo sasemini ukugoqwa kwesaladi enhle yenkukhu.
Isaladi lenkukhu yinto engikhumbuza ukuba yingane njengoba kuyinto ebesihlala siyidla isidlo sasemini. Uhlobo ebesiludla kwakuyinkukhu egcwele imayonnaise kanye no-celery no-anyanisi oluhlaza… futhi siyazi ukuthi imayonnaise (ngenkathi imnandi) mhlawumbe ayisona isisekelo esihle sokudla.
Shintsha i-Mayo ye-Avocado
Le iresiphi elula ingena esikhundleni semayonnaise ngesisekelo esimnandi se-avocado, i-yogurt yamaGrikhi nokugqoka okulula. Ungasebenzisa noma yiluphi uhlobo lokugqoka ipulazi, bengisebenzisa okwenziwe ekhaya ngoba ngihlala ngineqoqo lami ukugqoka i-Buttermilk Ranch elula efrijini.
Ukugcina ngendikimba yesaladi yenkukhu ekhanyisiwe, ngiyathanda ukugoqa lokhu ngesinkwa esisicaba seFlatout ngoba sinama-khalori angama-90 kuphela futhi siphezulu kuwo womabili amaprotheni nefayibha (ukugcina isisu sami sijabule futhi sigcwele). Ngibe sengiyabeka ngemifino engiyithandayo efana no ulethisi notamatisi… kodwa ngiphinde ngangeza izaqathe ezigayiwe, amahlumela e-alfalfa, ukhukhamba osikiwe kanye namaslive anyanisi obomvu.
Isonge nge-Flatbread (noma i-ulethisi)
Bengilokhu ngijabulela ukudla okuningi ku Isinkwa esisicaba se-Flatout ngoba zinama-cal aphansi futhi anelisa ngokuphelele .. ungazigcwalisa ngakho konke kusuka ku-turkey taco inyama kuya koshizi kakhilimu nemifino.
Ziphinde zikhulu zihlutshulwe ngamafutha omnqumo, zifafazwe ngosawoti kagalikhi bese zibhakwa kwisigaxa samakhalori aphansi ukuze zisebenze ngesidlo sakho sasemini osithandayo noma njengokudla okulula.
Iphelele ngenkukhu esalayo
Kulungile buyela kulokhu kugoqwa kwesaladi le-Avocado Ranch Chicken… nakanjani uzofuna ukungeza lokhu kumenyu yakho. Kuyindlela ephelele yokujabulela inkukhu esele (noma i-turkey), esheshayo futhi elula ukuyenza futhi ingalungiswa ngaphambi kwesikhathi. Ukugcwaliswa kuzohlala cishe izinsuku ezintathu efrijini.
Siyiphaka ngesaladi lezithelo elisha lesidlo sakusihlwa esilula noma isidlo sasemini.
Ukugcwaliswa Okukhulu Kwamasangweji
Khipha ku-internet Egg isaladi Recipe - Classic iqanda isaladi kunothile ukunambitheka!
Isaladi likaHam - Ilungele i-ham ebhakwe esele esele!
I-BEST Chicken Salad - Intandokazi yethu yenza ngaphambi kwasemini!
Isaladi leShrimp - Ilungele isimo sezulu esifudumele!
Isaladi le-Tuna yakudala - Ukugcwaliswa okuphelele!
Isikhathi sokulungiselela5 imizuzu Isikhathi Esiphelele5 imizuzu Izinkonzo4 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Lesi saladi esilula se-Avocado Ranch Chicken silayishwe ukunambitheka (futhi akuqukethe imayonnaise) yohlobo olukhanyayo olumnandi lwesaladi ejwayelekile yenkukhu. Phrinta Phina
▢4 okukhanyayo Flatout flatbreads
▢1 ukwatapheya kuhlutshiwe futhi kugxotshiwe
▢½ isipuni ijusi kalamula
▢⅓ inkomishi amafutha wama yoghurt amahhala
▢⅓ inkomishi ukugqoka ipulazi elikhanyayo okubhodlela noma okwenziwe ekhaya
▢1 isipuni idile entsha
▢1 isipuni iparsley entsha
▢usawoti kanye nopelepele ukunambitha
▢ezimbili izinkomishi inkukhu ephekiwe
▢1 inkomishi isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Faka ukwatapheya nejusi likalamula esitsheni. Mash kuze kucishe kubushelelezi (iziqeshana ezimbalwa zilungile).
Hlanganisa i-yogurt, ukugqoka, i-dill, iparsley nosawoti nopelepele. Faka inkukhu nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi uhlanganise kahle.
Beka isibani esisodwa se-Flatout flat ebusweni bakho. Phezulu nge ulethisi notamatisi uma usebenzisa. Engeza ingxube yenkukhu bese ugoqa kahle. Sika uhhafu bese ukhonza.
Amakholori:454,Amakhabhohayidrethi:29g,Amaprotheni:2. 3g,Amafutha:28g,Amafutha agcwalisiwe:5g,Cholesterol:60mg,I-Sodium:477mg,Potassium:560mg,Umucu:6g,Ushukela:ezimbilig,Uvithamini A:330IU,Uvithamini C:8.6mg,I-calcium:55mg,Insimbi:2.6mg
Igama elingukhiyeinkukhu isaladi InkamboIsikhangisi KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
REPIN le Recipe Emnandi
I-Ham & Hash Brown Breakfast Isonga
I-California Avocado Chicken Club Sandwich
Izindebe Zewundlu LamaGrikhi
Lokhu okuthunyelwe kwaxhaswa ngabangane bethu eFlatout. Siyathanda ukusebenzisana nemikhiqizo esiyisebenzisayo futhi esikuthandayo ukukulethela izindlela zokupheka ezintsha ozozijabulela! Lokhu kubambisana kusiza ukusekela leli sayithi ngaphandle kwezindleko kuwe futhi ngenkathi ngikhokhelwa, yonke imibono ingeyami.